Somalia oo wacdaro ka dhigaysa meel u xirnayd Kenya! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo wacdaro ka dhigaysa meel u xirnayd Kenya!
Somalia oo wacdaro ka dhigaysa meel u xirnayd Kenya!
(Muqdisho) 15 Maarso 2019 – Hanaanka lacagaha laga isticmaalo taleefannada ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in uu hada ka sareeyo midka Kenya.
Inkastoo ay Soomaaliya meelo badan dunida kaga hooseyso hadana waxaa jira habab badan oo casri ah oo aan ka jirin meelaha qaar ama adeegsigoodu ku yar yahay, kuwaas oo ay aad u sahlan tahay in aad ka hesho Soomaaliya.
Warbixin uu Baanka Adduunku soo saaray sanadkii hore ee 2018 ayaa lagu sheegay in Soomaaliya uu iminka ka jiro adeegga ugu sarreeya dunida ee ah taleefannada lacagta la isugu diro ama loo isticmaalo sida baanka oo kale dadkuna wax ku kala iibsadaan (telephone money transfer).
Warbixintan waxaa lagu sheegay in adeegga lacagta taleefannada ee Soomaaliya uu hadda ka sarreeyo midka Kenya ee loo yaqaan Mpessa kaas oo bariga Afrika mar diiq ka ahaa, waa se markii dal kasta iskii loo eego.
Waxaa la sheegay in tobankii qof oo Soomaali ah oo ka weyn 16 jir ay sagaal ka mid ihi heystaan taleefanka gacanta.
Sidoo kale 73% oo ah dadka ka da’ weyn 16 jir ugu yaraan waxa ay bishii isticmaalaan hal mar qaabka lacagta taleefanka gacanta ee wax lagu iibsado.
40% waxa ay sheegeen dadka soomaaliyeed in ay biilasha ku bixiyaan lacagta taleefanka.
Baanka Aduunka waxa uu sheegayaa in sare u kaca isticmaalka taleefannada loo aaneeynayo lacagaha been abuurka ah oo suuqa ku batay, iyo iyadoo aanu jirin hanaanka bangi oo adag.
15% oo qura ayaa la sheegay in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin koonto xisaabeed bangi oo ay lacagta ku shubtaan.
Previous articleDASTUUR DADWAYNE: Ka bogo 19 qodob oo ka mid ah QAANUUNKA AAN QORNAYN ee ay bulshadu ku dhaqanto (Qaybtii 3-aad)
Next articleDF Somalia oo saxiixday mashruuc jidad waawayn looga dhisayo gobollada dalka (Imisa magaalo ayay isku xirayaan?)